Josoe 19 - Ny Baiboly
Josoe toko 19
Ny faritany nomena ny foko enina, dia ny fokon'i Simeona, Zabolona, Isakara, Asera, Neftalì, ary Dana; anjaran'i Josoe.
1Simeona no nahazo ny anjara faharoa tamin'ny loka, dia ny fokon-taranak'i Simeona, araka ny fianakaviany: ny lovany dia tao afovoan'ny lovan'ny taranak'i Joda. 2Ary izao no tao amin'ny lovany: Bersabe, Sabea, Moladà, 3Haser-Soala, Balà, Asema, 4Eltolada, Betola, Harmà, 5Sikelega, Beti-Harkabota, Hasersosa, 6Beti-Lebaota, ary Sarohena: tanàna telo ambin'ny folo sy ny zanabohiny. 7Aina, Bemona, Atera, ary Asàna: tanàna efatra sy ny zanabohiny, 8mbamin'ny zanabohitra rehetra manodidina ireo tanàna ireo, hatrany Baalata-Beera, dia Ramata atsimo. Izany no lovan'ny fokon-taranak'i Seimeona, araka ny fianakaviany. 9Ny anjaran'ny taranak'i Jodà no nangalana ho lovan'ny taranak'i Simeona, satria ny anjaran'ny taranak'i Jodà dia lehibe loatra ho azy ireo, ka tao afovoan'ny taniny no nahazoan'ny taranak'i Simeona ny lovany.
10Ny taranak'i Zabolona, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahatelo tamin'ny loka, tonga hatrany Sarida ny faritry ny lovany, 11niakatra niankandrefana mankany Meralà, ny faritra, nipaka tamin'i Dabaseta, nipaka tamin'ny ranon-driaka ao anoloan'i Jekonama. 12Avy eo Sarida dia niolaka niantsinanana manandrify ny masoandro miposaka hatrany amin'ny faritr'i Keseleta-Taboro, nihatra hatrany Dabereta, ary niakatra hatrany Jafie. 13Avy eo dia nihazo tamin'i Gata-Hefera sy Takasina, any atsinanana, manandrify ny masoandro miposaka ary nihatra tamin'i Remona izay mifanolotra amin'ny Noà. 14Dia niolaka ny faritry ny tany mianavaratra mankany Hanatona, sy nihatra tamin'ny lohasaha Jeftahela. 15Ny tanàna dia Kateta, Naalola, Semerona, Jedalà sy Betilehema, tanàna roa ambin'ny folo ary ny zanabohiny. 16Izany no lovan'ny taranak'i Zabolona, araka ny fianakaviany, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny.
17Isakara no nahazo ny anjara fahefatra tamin'ny loka; dia ny taranak'Isakara, araka ny fianakaviany. 18Ka ny faritry ny taniny dia Jezraela Kasalota, Sonema, 19Hafaraïma, Seona, Anaharata, 20Rabota, Kesiona, Abesy, 21Rameta, En-Ganima, En-Haddà, Beti-Fesesa. 22Ary ny faritry ny taniny dia nikasika any Tabora sy Sedesema ary Beti-Samesy, ka tafapaka hatrany Jordany, tanàna enina ambin'ny folo sy ny zanabohiny. 23Izany no lovan'ny fokon'ny taranak'Isakara araka ny fianakaviany, dia ny tanàna sy ny zanabohiny.
24Ny fokon-taranak'i Asera araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahadimy tamin'ny loka. 25Ny faritry ny taniny dia Halkata, Kalì, Betena Aksafa, 26Elmeleka, Amaala sy Mesaby; ary eo andrefana, dia nipaka tamin'i Karmela sy Sihora-Labanata, 27dia niolaka mankany Beti-Dagona, nipaka tamin'i Zabolona sy ny lohasaha Jeftahela eo avaratr'i Beti-Emeka sy Nahiela ary nihatra tamin'ny tanin'i Kabola eo an-kavia, 28sy Abrana, Rohoba, Hamona ary Kanà, hatrany Sidona Lehibe, 29dia niolaka ny faritry ny tany mankany Ramaha hatrany Tira, tanàna mimanda, ary niolaka ny faritra mankany Hosa, ka nihatra tamin'ny ranomasina, akaikin'ny faritanin'i Akziba, 30fanampin'izany Amà, Afeka, ary Rohoba; tanàna roa amby roapolo sy ny zanabohiny. 31Izany no lovan'ny fokon-taranak'i Asera, araka ny fianakaviany, dia ireo tanàna ireo sy ny zanabohiny.
32Ny taranak'i Neftalì, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahenina, tamin'ny loka. 33Ny faritry ny taniny dia hatrany Helefa avy eo amin'ny aoka ao Saananima no nankany Adami-Nekeba sy Jebnaela ka hatrany Lekoma, dia nihatra tao Jordany. 34Niolaka niankandrefana any Azanota-Tabora ny faritra, ary avy ao dia nihatra tany Hokokà, nipaka tamin'i Zabolona eo atsimo, sy tamin'i Asera eo andrefana, ary tamin'i Jodà, teo akaikin'i Jordany, eo atsinanana. 35Ny tanàna mimanda dia Asedima, Sera, Emata, Rekata, Kenereta, 36Edemà, Aramà, Asora, 37Kedesy, Edraïa, En-Hasora, 38Jerona, Magdalela, Horema, Beti-Anata, ary Beti-Samesy; tanàna sivy ambin'ny folo sy ny zanabohiny. 39Izany no lovan'ny fokon-taranak'i Neftalì, araka ny fianakaviany, ny tanàna sy ny zanabohiny.
40Ny fokon-taranak'i Dana, araka ny fianakaviany, no nahazo ny anjara fahafito tamin'ny loka. 41Izao no tao anatin'ny faritry ny lovany: Saraà, Estaola, Hira-Semesy, 42Selebina, Ajalona, Jetelà, 43Elona, Temnà, Akrona, 44Elteke, Gebetona, Balaata, 45Jodà Bene-Baràka, Geta-Remona, 46Mejarkona, ary Arekona, mbamin'ny faritany tandrifin'i Jope. 47Nitatra ho eo ivelan'ny azy ireo ny faritanin'ny taranak'i Dana; fa niakatra niady tamin'i Lesema ny taranak'i Dana, ka nahafaka azy sy namely azy tamin'ny lelan-tsabatra, ka nahazo azy sy nanorim-ponenana tao, ary niantso azy hoe Dana, araka ny anaran'i Dana, rain'izy ireo. 48Izany no lovan'ny fokon-taranak'i Dana, araka ny fianakaviany, ny tanàna sy ny zanabohiny.
49Nony vitan'izy ireo ny fizarana ny tany, araka ny faritra mamaritra azy avy, dia nomen'ny zanak'Israely lova, teo afovoan'izy ireo, Josoe, zanak'i Nona. 50Noho ny didin'ny Tompo dia nomen'izy ireo azy ny tanàna nangatahiny dia Tamnat-Sare amin'ny tendrombohitr'i Efraima. Naoriny indray ny tanàna, dia nonina tao izy.
51Ireo no lova nozarain'Eleazara mpisorona, sy Josoe zanak'i Nona, ary ny loham-pianakaviana amin'ny fokon'ny zanak'Israely, tamin'ny filokana, tany Silao, teo anatrehan'ny Tompo, teo am-baravaran'ny trano lay fihaonana. Izany no nanaperany ny fizarana ny tany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0563 seconds